Abavelisi kunye neFektri yePoly Shicilela isikhafu isikhafu abavelisi
Isikhafu se-polyester esincinci
Xa unxibe isikhafu, ukhathalelo oluthambileyo noluthambileyo kwesikhumba, makhe uzive ukhululekile imini yonke. 100% ipholiyesta Ubungakanani obungenisiweyo: 35 ″ x 35 ″ / 86cm x 86cm, isikwere, ubungakanani beethayile. Isixhobo: I-100% yoyilo lwepholiyesta: Iintlobo ngeentlobo zoyilo olukrelekrele kunye neepateni eziprintiweyo ngononophelo (ushicilelo olukwicala elinye), imibala emihle eqaqambileyo, iipateni ezintle ezintle. Ukupakishwa kwebhokisi lesipho. Kufanelekile: I-Square bandana, iinwele zodidi. Ingasetyenziswa unyaka wonke. Unokuyinxiba entanyeni, entloko, kwi-wais ...
Isikhafu sePolyester esiphefumlayo
Isikhafu sokuprinta se-viscose esiyi-100%
Uxelise isikhafu isikhafu isikhafu